बुंक्षिहाङ मिलन, Author at ePosttimes
Articles by बुंक्षिहाङ मिलन
१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार १७:३६ 0
साउन-८, सुनसरी । बिश्वब्यापी अनलाईन कोङकोङमा (बिनायो) वादन खुला प्रतियोगिता-२०७८ को बिजेताहरुलाई आज एक औपचारिक कार्यक्रम मार्फत पुरस्कार वितरण गरियो। आयोजक समिति किरात राई साँस्कृतिक कलाकार संघको केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा पुरस्कारमा […]
२ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०४:५३ 0
फागुन-२, धरान । आज अंग्रेजी क्यालेण्डको १४ फेब्रुअरी अर्थात प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन्स डे) नेपाल लगायत विश्वभर जोडीले एकअर्काप्रति प्रेम साटासाट गरी मनाइँदैछ । हरेक वर्ष १४ फेब्रुअरीका दिन प्रेमीप्रेमिकासँगै आफन्त […]
१ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०७:४० 0
-विज्ञान प्रविधिन डा. रवीन्द्र पाण्डे सन् २०२० संसारका लागि त्रासको वर्ष भयो । कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि विश्व नै अकल्पनीय सङ्कटमा प¥यो । सन् २०२१ भने त्रास […]
८ माघ २०७७, बिहीबार १२:१० 0
माघ-८, काठमाडौँ । प्रेस सङ्गठन नेपालको आज सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय भेलाले सहसंयोजक गणेश बस्नेतलाई सर्वसम्मतरुपमा संयोजकमा चयन गरेको छ । सङ्गठनका संयोजक महेश्वर दाहाल सङ्गठनका काममा निष्क्रिय रहनुभएको जनाउँदै उहाँलाई […]
८ माघ २०७७, बिहीबार ११:५९ 0
माघ-८, काठमाडौं । भारतले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोनाविरुद्धको खोप आज काठमाडौं आएको छ । केही बेरअघि एयर इन्डियाको विमानबाट कोरोनाविरुद्धको खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको हो । नेपालका लागि […]
७ माघ २०७७, बुधबार १३:०२ 0
माघ-७, काठमाडौ । भारत सरकारले नेपाललाई १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने भएको छ । बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो […]
७ माघ २०७७, बुधबार ०५:०५ 0
माघ-७, काठमाडौं । कोरोनाको त्रास कम भएसँगै वाणिज्य बैंकहरु कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका छन् । लकडाउनका कारण लामो समय व्यापार व्यवसाय ठप्प रहँदा बैंकको कर्जा लगानी प्रभावित भएको थियो । […]
२९ पुष २०७७, बुधबार ११:२७ 0
पुस-२९, काठमाडौं । पछिल्लो चौबीस घण्टामा कोरोना भाइरसका ४ सय ४५ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । त्यस्तै ४ सय १४ जना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्केका छन् । स्वास्थ्य तथा […]
२६ पुष २०७७, आईतवार १६:०६ 0
पुस-२६,काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाभाइरसका २ सय ५९ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा ५ सय १३ जना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्केका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा ५ […]
१२ पुष २०७७, आईतवार ०४:१७ 0
पुस-१२, बिराटनगर । प्रदेश १ का अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बर्खास्त गरेको भोलिपल्ट सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र दुईजना राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । तीनैजनाले राजीनामा पत्रमा […]
२७ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०३:५६ 0
कात्तिक-२६. धरान । कोरोनाको महामारीको कारण यसपाली देउसी खेल्न निषेध गरेपनि धमाधम हरेक बर्ष झैँ देउसी गीतहरु निकाल्ने क्रम यस बर्ष पनि जारी नै रहेको छ । यसैको भींडमा गायक […]
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार १४:५० 0
-शारदा तामाङ राई कार्तिक-२४ भोजपुर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले टेम्के मैयुङ गाउपालिकामा टयाम्के भ्यु टावरकोे शिलान्यास गरेका छन । आईतबार गृह जिल्ला भोजपुर आएका मुख्यमन्त्री राईले […]